Pakistana: Ny fanakanana bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2018 13:21 GMT
Ny tenako manokana dia nanohitra ity fandrarana ny blogspot.com ity izay fomba tokana noheveriko fa lojika, ary izany dia nanombohana ny fanentanana AZA SAKANANA NY BILAOGY niarahana tamin'ny namana bilaogera tranainy iray, Awab Alvi.
Nanambara ny fanombohana ny fanentanana i Teeth Maestro; Nanazava tamin'ny antsipiriany ny raharaha blogspot ihany koa i Procrastination ; Nanolo-kevitra tamin'ny fanoherana ny fandrarana i Danial; Nanolotra fomba sasantsasany manodidina ny fandraràna i Ovais Khan; ary farany, Windmills ihany koa dia nanoratra valiny mahery vaika tamin'ity fandraràna ny blogspot.com ity tao Pakistana.
Nandrisika ny mpamaky rehetra aho mba hanohana ny fanentanana nataonay na ny fanentanana hafa rehetra momba ny fanehoan-kevitra malalaka an-tserasera. Tena raharaha lehibe izany. Ary misaotra anareo rehetra aho izay nanohana ny fanentanana nataonay sy/na nanao hetsi-panoherana tamin'ity fanakanana ny blogspot.com ity.